Nin kufsaday gabar Soomaaliyeed maxaa lagu aamini karaa? - Caasimada Online
Home Maqaalo Nin kufsaday gabar Soomaaliyeed maxaa lagu aamini karaa?
Nin kufsaday gabar Soomaaliyeed maxaa lagu aamini karaa?
Ma ciidanka dawladbaa mise waa cadawga dawlada?
Marka dhagahaagu kusoo dhacaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, waxaad dareemaysaa farxad, waxaad dareemaysaa kalsooni, waxaad dareemaysaa neecow gobanimo,
Waxaad dareemaysaa awood aad ku kalsoonaan karto oo kaa difaaci kara cadawga umada Soomaaliyeed, rag fara badan oo sharaf badan bulshada ku dhex lahaa kana tirsanaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya,ayaa u naf waayay difaaca sharafta iyo karaamada umada Soomaaliyeed, burburkii ku yimid kow iyo sagaashankii ciidamadii qaranka wuxuu nabaday, dhibaatooyin badan oo aan lasoo koobi karin, umada Soomaaliyeed mar walba waxaa laabtooda ku taagnaa in ay helaan ciidan qaran oo badbaadin kara sharaftooda umadnimo.
Runtii askariga dhabta ah ee xalaal quudadka ah wuxuu qabtay howl dhaxal gal ah, maalin walbana dhaayuhu waxeey arkaan ama dhaguhu maqlaan, horumar balaaran oo ay gaareen ciidamada qaranka, bad dhanse waxaa qurmiya hal kaluun ah, taasoo macnaheedu yahay, kuwo fara kutiris ah ee haybadii iyo karaamadii ciidanka ka door biday, bililiqaysi iyo kufsi, kuwaasi ma garan karaan xilka dhabarka u saaran iyo sida ay u gudan lahaayeen.
Waxaan ugu baaqayaa dhamaan ciidamada qalabka sida in ay u istaagaan,sideey isaga dhex qaban lahaayeen la harka magacooda iyo mansabkooda dilaaya, isla markaana u arkaan cadowga ugu wayn oo ay leeyihiin midkaas aan iimaanka lahayn.
Hadaase iska qaban weeydaan oo aad dhowrataan dhiigiina daadanaaya ee aad u hurteen dalkiina iyo dadkiina, wuxuu noqon doonaa mid iska daata oo aydaan wax sharaf ah ku heli doonin, waa ineey idin dhibtaa hadalka xanuunka badan ee ah ciidamada dawladaa gabadh Soomaaliyeed kufsaday, wax aad qadan kartaan yay noqon.